Uyenza kanjani imali: okhiye bokuthola okungeziwe ekupheleni kwenyanga | Ezezimali Zomnotho
Enye ye ukukhathazeka okukhulu ngomuntu okwenza imali. Asisakhulumi ngezikhathi zobunzima, zenhlanhla, zezikhathi lapho kulula khona ukuthola umsebenzi ... Sikhuluma ngokumane senze imali. Futhi kulapho okuhlangana khona.
Kepha ukukuthola akulula. Futhi kwesinye isikhathi kufanele ucabange okuningi ngamathuba owethulwayo kuwe ukufeza inhloso. Vele, ayikho indlela yomlingo ezokwenza ucebe, futhi ayikho ingcweti ongacela kuyo leso sifiso. Unengqondo yakho kuphela namathuba akuvumela manje ukuthi uthole imali.
1 Izikhiye zokwenza imali
2 Indlela yokwenza imali online
2.1 Ukumaketha Okuhambisanayo
2.2 Nikeza izinsizakalo zakho
3 Uyenza kanjani imali usebenza ekhaya
3.1 Umsizi / Unobhala Ongokoqobo
3.2 Ababhali / Abahumushi
3.3 Ukuthengiswa kwemisebenzi yezandla
4 Uyenza kanjani imali ngokushesha ngosuku olulodwa
4.1 Thengisa izingubo ongasazifuni
4.2 Thengisa izincwadi osuvele uzifundile
4.3 Thengisa konke
4.4 Fundisa amakilasi ukuze uthole imali
Izikhiye zokwenza imali
Ngokubheka ukuthi umphakathi womhlaba ubuswa ucezu lwephepha noma imali emele imali (futhi noma ngubani onalawo maphepha nezinhlamvu zemali ucebile), kunengqondo ukucabanga ukuthi uyakudinga lokho ukuze uphile.
Asisakhulumi "ngokuphila kahle", kepha sesiphila nje. Esikhathini esedlule, abantu babelana ngalokho abanakho, njengokushintshana, ngendlela yokuthi uma ufuna amaqanda, kufanele unikele ngokuthile kwakho, njengobisi.
Manje lokho sekuguqukile, futhi okhiye bokwenza imali babhekisa ku:
Sebenzisa okuthile ongasiza ngakho. Noma ngabe ngumsebenzi, ubuhlakani, ulwazi ...
Musa ukuma. Njengamanje ungathola imali eningi ngangokunokwenzeka futhi ungakwazi. Lokho kusho ukuthi akudingeki usondele ebhizinisini, ukuthi ungenza okuningi futhi udinga ukusebenza.
Ungalindeli ukwenza imali ngokuba livila. Uxolo, kepha yize kunezindlela eziningi zokuthola amathikithi ambalwa, lokhu akuhlali unomphela.
Ukhiye obaluleke kakhulu empumelelweni uku xazulula inkinga wonke umuntu anayo. Isibonelo, uyazi ukuthi ngubani owasungula i-mop? Ngaphambi kokuba ingekho futhi bekufanele ukolobhe phansi, ngakho-ke abantu babenezinkinga zasemhlane, izinkinga zamadolo ... Kepha ngenkathi kusungulwa i-mop kwaba yinguquko ngoba yayinikeza isisombululo kuwo wonke umuntu. Akusekho buhlungu noma amazwi enduduzo ukuhlanza, vele usebenzise induku enemiphetho emanzi. Noma, ngokwesibonelo, umakhalekhukhwini, owawuyisixazululo sabaningi ababengekho ehhovisi ukuze bahlale bexhumekile.
Futhi ekugcineni, ulahlekelwe ukwesaba. Kujwayelekile ukuthi uma uhola inani elithile lemali ungafuni ukufaka engozini enkulu uma kwenzeka ulahlekelwa yilokho onakho (noma wenze utshalomali olubi). Impilo igcwele ukwehluleka nempumelelo. Kepha kufanele uzame inhlanhla yakho, ngoba kulapho kuphela lapho uzokwazi ukukhulisa umnotho wakho.
Indlela yokwenza imali online
Njengoba sazi ukuthi okhiye abayinikezi impendulo enkingeni yakho, sizoqhubeka futhi siphakamise ukuthi ungayithola kanjani imali ezimweni ezahlukahlukene: i-Intanethi, ekhaya, ngosuku olulodwa ... Impela eminye yemibono esiyiphakamisayo izokusiza, ukufeza noma njengesisekelo sokwenza okungcono.
Endabeni ye-Intanethi, unezindlela eziningi ongakhetha kuzo. Uma unesikhathi soku chitha amahora amaningi ngosuku phambi kwekhompyutha, lapho-ke kungenzeka ukuthi uthola "okungeziwe" ekupheleni kwenyanga kumnandi kakhulu.
Isibonelo, eminye imibono yokwenza imali nge-inthanethi yile:
Unayo iwebhusayithi noma ibhulogi? Yebo, kunezitolo ezifana ne-Amazon noma i-Aliexpress, i-PCComponentes ... ezinikeza ithuba lokukhangisa ngemikhiqizo yazo kuwebhusayithi yakho ukuze uthole iphesenti lokuthengisa okwenziwe ngesixhumanisi sakho.
Ungabhala izindatshana ngemikhiqizo evela kulezo zindawo, nokuthi abantu basebenzisa isixhumanisi obanikeza sona ukuzithenga futhi ngaleyo ndlela bazuze wena.
Kwenzeka okufanayo ngokukhangisa okubeka kuwebhusayithi yakho, futhi kukunikeza imali kwi-Intanethi.
Nikeza izinsizakalo zakho
Ngabe uyakwazi ukubhala? Xhumana nabantu? Unamanethiwekhi omphakathi? Yebo, mningi umsebenzi ku-Intanethi walolu hlobo: ababhali, abagqugquzeli, abaphathi bomphakathi ... Zonke lezi zikhundla zizoba yikusasa, futhi uhola imali ekupheleni kwenyanga lokho okubalulekile. Ungahle uyeke nomsebenzi wakho wamanje ukuze uzinikele kulokhu.
Kungasetshenziswa okufanayo naku abaqeqeshi bomuntu siqu, umthengi uqobo, izazi zokusebenza kwengqondo ...
Abaningi bahlehla ekuthatheni ucwaningo ngoba bethi kwenziwa imali encane. Futhi yize kuliqiniso, inhlolovo ayithathi isikhathi eside futhi uma uthola okwanele ngenyanga, ungathola okunye okungekubi. Akukona okokuphila, kepha kungenxa yezifiso ezithile.
Uyenza kanjani imali usebenza ekhaya
Iphupho labantu abaningi akusikho ukuthi kufanele bashiye amakhaya bayosebenza. Uma lokho kuyinjongo yakho, kunezinketho eziningi zokuthola imali. Sikunikeza izibonelo ezithile.
Umsizi / Unobhala Ongokoqobo
Leli bhizinisi liyakhula njengamanje futhi izinkampani eziningi zifuna abantu abazosebenzela ekhaya. Unesibonelo ku- I-Amazon, evame ukuthumela ukunikezwa kwemisebenzi yabasizi ababonakalayo noma insizakalo yamakhasimende lapho ungadingi ukuya ehhovisi, ukwenzela ekhaya.
Uma ukwazi ukuhlela kahle, unamakhono abantu namahora ambalwa ngosuku ukuze usebenze, manje usungazuza imali ngale ndlela.
Ababhali / Abahumushi
Kusuka ekhaya, ungahlala usebenza njengomhumushi noma njengombhali wamakhophi wabantu ngabanye nezinkampani. Abaningi badinga ukuhumusha imibhalo besuka kolunye ulimi baye kolunye, futhi kuyindlela yokwenza imali ethe xaxa ekhaya.
Okufanayo kuya kubahleli; uma uyakwazi ukubhala, ungazama. Ukuphela kwento oyidingayo ukuxhumana okuhle kwe-Intanethi nokushesha ngamagama.
Ukuthengiswa kwemisebenzi yezandla
Okunye ongakwenza ukuze uthole imali ukukwenza ngobuciko obenzayo. Uma ungumpetha kwezobuciko futhi ukwazi ukudala imikhiqizo eheha abanye, kungani ungazithengisi?
Isibonelo, ungenza insipho ekhethekile, futhi manje seyimfashini kakhulu. Noma ungakha imidwebo, izithombe, izikibha ...
Uyenza kanjani imali ngokushesha ngosuku olulodwa
Siyazi ukuthi imali kwesinye isikhathi iyadingeka ngokushesha futhi ngokushesha okukhulu. Futhi kunamathuba okukuthola. Ikakhulu nalokhu okulandelayo:
Thengisa izingubo ongasazifuni
Ibhizinisi lezingubo ezingamasekeni liyachuma manje, hhayi ngenxa yezicelo zamaselula esezivelile, kodwa naku- izitolo zezimpahla ezingamasekeni ziyayithenga. Vele, qaphela inani olibuzayo naleyo abakunikeza yona, ngoba ingahluka kakhulu.
Thengisa izincwadi osuvele uzifundile
Enye indlela "ukunciphisa isisindo" umtapo wezincwadi onawo. Uma usuvele uzifundile izincwadi futhi ungahlelile ukuphinde uzenze, kungani uzishiye eshalofini uma zingaba yimali eyengeziwe kuwe?
Kunezitolo eziningi ezidayisa izincwadi ezingamasekeni nezasendulo. Eqinisweni, mhlawumbe unenye ebaluleke kakhulu eyenza ukuthi uzuze imali enkulu.
Impela endlini yakho unezinto ongasazisebenzisi, eziqoqa uthuli. Kungani ungabaniki ukusetshenziswa okusha? Bangu izitolo ezithengisa izinto, abanye abasebenzisi ... ukuze bakujabulele onakho.
Isibonelo, imidlalo yekhonsoli neyamavidiyo, izinsimbi zomculo ongasazisebenzisi, amadivayisi kagesi, amagajethi ...
Fundisa amakilasi ukuze uthole imali
Uma ungumpetha wesifundo esithile, noma ufunda kahle esikoleni noma ezifundweni eziphakeme, ungathola imali ngosuku olulodwa ngokunikeza izifundo ezizimele. Futhi, manje usungakwazi khetha ukubanika ku-inthanethi futhi uqobo.
Intengo oyikhokhisayo ngeke ifane, kepha uma uthola iqembu elikhulu labafundi, kungenzeka ukuthi uthola impintshi enhle ekupheleni kwenyanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ukuphela kwenyanga » Ungayenza kanjani imali